running & အခမဲ့ရွရွပြေး | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » လူနေမှုပုံစံစတဲ့ » running & ရွရွပြေး
running & ရွရွပြေး APK ကို
အဆိုပါ Zeopoxa ကို run & app ကိုရွရွပြေးနှင့်သင်၏အရှိန်အဟုန်ကိုခြေရာခံ, အတိုင်းအတာယလေ့ကျင့်ခန်းအကွာအဝေး, ကယ်လိုရီလောင်ကျွမ်းမှတ်, လေ့ကျင့်ရေးရည်မှန်းချက်များနှိပ်စက်နှင့်ပိုပြီး။ အဆိုပါလမ်းကြောင်းသို့မဟုတ်လမ်းများပေါ်, လမ်းကြောင်းပေါ်တွင်သင်ဘယ်မှာနေပါစေနေပါ။ မည်သို့ပင်သင့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကအလေးချိန်, ပုံသဏ္ဍာန်နှင့်သေံဆုံးရှုံးအစွမ်းသတ္တိကိုတညျဆောကျ, ပိုမြန် get သို့မဟုတ်ခံနိုင်ရည်တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်သို့မဟုတ်ပဲရွရွပြေးသို့မဟုတ် running ဖြစ်, ဒီကြံ့ခိုင်ရေး app ကိုသငျသညျပိုမြန်သင့်ရဲ့ပန်းတိုင်များကိုအောင်မြင်ရန်ကူညီပေးပါမည်။ ဒီ app နှင့်အတူ, သငျသညျ, GPS, ကိုသုံးပြီးသင့်ရဲ့လေ့ကျင့်ခန်းများအားလုံးကိုခြေရာခံသင့်ရဲ့စာရင်းဇယားများစစ်ဆေး, သင်၏ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကိုရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ ရှည်လျားတဲ့အကွာအဝေးဖုံးလွှမ်းလွန်းကိုမီးရှို့ပိုပြီးကယ်လိုရီညီမျှ! ဒီနေ့သင့်ရဲ့ပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းကိုယူသင့်ရဲ့ဖုန်းပေါ်မှာ app ကိုကို run & ရွရွပြေးအခမဲ့ Zeopoxa ဒေါင်းလုပ်လုပ်ကာပြေး tracker နှင့်ကြံ့ခိုင်ရေး tracker ဖြစ်ခြင်း၏တစ်ဦး Fitter နှင့်ကျန်းမာသန်စွမ်း lifestyle.On ထိပ်ကိုယ့်ကိုကိုယ်တွန်းအားပေး, ဒီ app ကိုသင့်ရဲ့ကြံ့ခိုင်မှုတိုးတက်လာဖို့ပိုပြီးအများအပြား features တွေအားဖြင့်သင်တို့ကိုထောက်ပံ့ပေး နှင့်သင်သည်သင်၏လေ့ကျင့်ခန်းခံစားနေအာမခံပါသည်။
APP ကိုအင်္ဂါရပ်များ & အကျိုးခံစားခွင့်
ဂျီပီအက်စ် & မော်နီတာလေ့ကျင့်ခန်းတိုးတက်မှုနှင့်အတူ Real-time အတွက် * မြေပုံလေ့ကျင့်ခန်း
* သင့်ရဲ့ပြေးများနှင့်ရွရွပြေးလှုပ်ရှားမှုအတွက်လမ်းကြောင်းအကွာအဝေး, ကြာချိန်, အမြန်နှုန်းနှင့်ကယ်လိုရီမီးလောင် calculate ကို - မြင့်မားသောတိကျမှန်ကန်မှုနှင့်စစ်မှန်သောကာလ၌
သငျသညျ, နှေးနှေးပုံမှန်သို့မဟုတ်အစာရှောင်ခြင်းကို run နှင့်သင် run လမ်းကြောင်းနှင့်အတူ map အချိန် * သင်ကပြီးအောင်ပြီးနောက်လာမယ့်သတင်းအချက်အလက်များကိုကြာချိန်နှင့်အတူ, သင့်လှုပ်ရှားမှုအကြောင်းကိုအပြည့်အဝအစီရင်ခံစာ Get, အကွာအဝေး, ကယ်လိုရီလောင်ကျွမ်းပျမ်းမျှအမြန်နှုန်း, max ကိုမြန်နှုန်းပျမ်းမျှနှုန်း, ရာခိုင်နှုန်း
* အကွာအဝေး, အချိန်နှင့်ကယ်လိုရီအဘို့အဆင့်မြင့်ဂရပ်များ3ကွဲပြားခြားနားသောကြားကာလ (အပတ်ကလနှင့်တစ်နှစ်) တွင်, မီးမရှို့
* ဒီ app သင်မှန်သင်တို့အဘို့ရဲ့ပန်းတိုင်တစ်ခုသတ်မှတ်ပြီး (မီးရှို့ကယ်လိုရီအရေအတွက်, အကွာအဝေးခရီးထွက်သို့မဟုတ်တစ်နေ့တာအတွင်းအချိန်အပြေး) နှင့်သူတို့ပွီးမွောကျလာသောအခါအကြောင်းကြားစာအရခွင့်ပြုပါတယ်။
ကိုယ့် * ဘယ်သူမျှမကလက်ပတ်သို့မဟုတ်လိုအပ်သောတခြား hardware မရှိက်ဘ်ဆိုဒ်ရဲ့ login အခမဲ့ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီးချက်ချင်းပဲသင့်ရဲ့လေ့ကျင့်ခန်းကိုခြေရာခံကိုစတင်ပါ။ ဒီ app ကိုသင့်ဖုန်းမှလုံးဝအလုပ်လုပ်ပါတယ်။
* app တစ်ခုကိုအပြီးအစီးစိန်ခေါ်မှုများသည်နှင့်ပိုပြီး run သို့မဟုတ်ပြေးရတာမှလှုံ့ဆော်နေပါ
BMI Calculator ကို built-in အတူ * သင့်ရဲ့ BMI calculate ကို
သင်သည်သင်၏ကယ်လိုရီအရေအတွက်, အရှိန်အဟုန်, အမြန်နှုန်းအကွာအဝေးနှင့်အချိန်အကြောင်းကို run နေစဉ်အတွင်း * အသံဖိုင် updates များကို Get
ဒီ app ကို tracker နှင့်ကြံ့ခိုင်ရေး tracker တွင်ရွရွပြေး, သင်တို့၏ပြေး tracker တွင်ဖြစ်စေအသင့်ဖြစ်ပြီလား?
running & ရွရွပြေး
3.95 ကို MB
Runtopia - ...